I-Qualcomm iguqula imarike ngenzwa yeminwe engabonakaliyo | Iindaba zeGajethi
I-Qualcomm iguqula imarike ngenzwa yeminwe engabonakaliyo
I-Apple iboniswe ngo-2013 into entsha Kancinci kancinci kuye kwafikelela ngokuthe ngcembe phantse nasiphi na isixhobo esinefowuni esixabisa ityuwa yaso. Sithetha ngezinzwa zeminwe, ezo zixhobo zokhuselo ezingatshintshanga kuphela indlela esinxibelelana ngayo neefowuni eziphathwayo, kodwa ziye zafikelela nakwindlela esihlawula ngayo kwiivenkile eziqhelekileyo.
Ukusukela ngoko, inzwa yeminwe yeminwe iye yaxhaphaka ngakumbi, kodwa isidingo sokuhlala kwindawo ngaphambili siye saba sisikhubekiso kubudala apho i-bezel yangaphambili ithambekele ekubeni incitshiswe. I-Qualcomm ivelise isivamvo sayo somnwe, esifanayo nesisebenzisa imodeli yamva nje evela kwinkampani yaseTshayina iVivo.
Inzwa edityanisiweyo yeminwe evela kwiQualcomm iyakwazi ukufakwa kwiphaneli yealuminiyam nangaphantsi kweglasi yesikrini se-OLED. Ngaphandle kwamathandabuzo oku kubonisa inkqubela phambili ebaluleke kakhulu, kuba singabandakanya umfundi weminwe ngqo ezantsi kwesikrini. Inzwa yeQualcomm inokutshintsha ngokupheleleyo le teknoloji njengoko siyazi ukuza kuthi ga ngoku, yiyo loo nto bekhawulezile ukuyibonisa kwimodeli yakutshanje yohlobo lweVivo lwaseTshayina.
Oku kuyanzima kakhulu kwitekhnoloji i-Apple eyayizimisele ukuyifaka kwi-iPhone 8, ukusukela oko Inzwa yeQualcomm iya kuba nemirhumo yokusebenzisa, Kwaye njengoko sisazi kakuhle, iApple ngoku ingene kwinkqubo yomthetho ngokuchasene neQualcomm ngokuchanekileyo ekuhlawulisweni okugqithisileyo kolu hlobo lwamalungelo patent zeteknoloji.
Ukubuyela kwimeko esesandleni, inzwa izakusebenza kwimiboniso ye-OLED ukuya kuthi ga kwiimilimitha eziyi-1,2, kunye nasiphi na isigubungelo seglasi ukuya kuthi ga kwi-0,8 millimeters. Ngendlela enye, iya kusebenza kwiipaneli zealuminium eziyi-0,65 iimilimitha ubukhulu, Nangona le nkcukacha yokugqibela ibonakala ngathi ayinzima kangako, kuba iyakugcina ukubeka inzwa ngasemva, kanye le nto yenzelwe ukuba ithintelwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Qualcomm iguqula imarike ngenzwa yeminwe engabonakaliyo
Inguqulelo entsha yeefoto zikaGoogle ivumela ukuba sabelane ngeefoto ngendlela elula
I-iPhone ibhiyozela iminyaka eli-10 ikhokelela kwindlela